बेरुतमा विनाश गर्ने अमोनियम नाइट्रेट के हो ? कुन काममा उपयोग गरिन्छ ? – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/बेरुतमा विनाश गर्ने अमोनियम नाइट्रेट के हो ? कुन काममा उपयोग गरिन्छ ?
काठमाडौं। लेबनानको राजधानी बेरुत शहरको एक बन्दरगाहनजिकै भयानक विष्फोटले पूरै शहरमा विनाश मच्चाएको छ । विष्फोटमा ७८ जनाको मृत्यु भएको छ र ४ हजारभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । विष्फोट परमाणु बमजत्तिकै भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । विष्फोटको कारण अमोनियम नाइट्रेट भएको प्रारम्भिक जाँचमा खुलेको छ । यस विषयमा थप जाँच भइरहेको छ ।
जुन गोदाममा विष्फोट भएको थियो त्यहाँ ठूलो परिमाणमा अमोनियम नाइट्रेट राखिएको खुलासा भएको छ । यहाँ विगत ६ वर्षदेखि जफत गरिएको अमोनियम नाइट्रेट भण्डारण गरिँदै आइएको थियो । विष्फोट यतिसम्म भयानक थियो कि विष्फोटको आवाज २४० किलोमिटर टाढा अर्को देश साइप्रससम्म सुनिएको थियो । यो घटनासँगै अमोनियम नाइट्रेट के हो भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ ।
अमोनियम नाइट्रेट एक गन्धहीन रासायनिक पदार्थ हो । सीएनएनले वैज्ञानिकहरुलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार यो रासायनिक पदार्थको प्रयोग मुख्य गरी कृषिमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल र विष्फोटकहरुमा गरिन्छ । निर्माण क्षेत्र र खानीहरुमा गराइने विष्फोटमा यही पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यो रसायन निकै विष्फोटक हुन्छ । यसको प्रयोग अन्य विष्फोटहरुमा समेत गरिन्छ । उदाहरणको लागि १९९५ मा अमेरिकाको ओक्लाहोमामा भएको विष्फोटको घटना, २००२ मा इण्डोनेसियाको बालीमा भएको विष्फोटको घटना र २०११ मा नर्वेमा आतंकवादी आन्द्रेस बेहरिङ ब्रेभिकले गराएको विष्फोटमा यही रसायनको प्रयोग गरिएको थियो ।
यो पदार्थ आफू एक्लै विष्फोट हुँदैन तर यो पदार्थमा आगो लागेमा भयानक विष्फोट हुन्छ । विष्फोटपछि नाइट्रोजन अक्साइड र अमोनिया ग्यास निस्किन्छ । अमोनियम नाइट्रेट निकै ज्वलनशील पदार्थ भएकोले यसको भण्डारणको लागि कडा नियम बनाइएको छ । यसको भण्डारणका लागि बनाइएका नियममा यो पदार्थ राखिने भण्डार पूर्ण रुपमा फायरप्रुफ होस् भन्ने कुरा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँ कुनै पनि नाली, पाइप वा ढल नहोस् भन्ने निश्चित गरिन्छ किनकि कैयौं पटक तापक्रम र रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण पनि विष्फोट हुन्छ ।
लेबनानमा भएको यो विष्फोटपछि त्यहाँको अमोनियम नाइट्रेटमा आगो कसरी लाग्यो भन्ने खोजी भइरहेको छ । लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दियाबले गोदामलाई खतरनाक भनेका छन् । यो गोदाम २०१४ मा बनेको थियो । यहाँ २ हजार ७५० टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरिकाले राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री दियाबले घटनाका जिम्मेवारलाई कारवाही गरिने बताएका छन् । राष्ट्रपति मिशेल आउनले पनि असुरक्षित भण्डारणको कुरा स्जीकार गर्न नसकिने भताएका छन् ।
अमोनियम नाइट्रेटका कारण यसअघि पनि यस्तै किसिमका दुर्घटना भएका छन् । २०१३ मा अमेरिकाको टेक्ससमा एक रासायनिक मद कारखानामा विष्फोट भएको थियो जसमा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसअघि २००१ मा पनि फ्रान्सको टुलुजमा एक रसायन कारखानामा विष्फोट हुँदा ३१ जनाको ज्यान गएको थियो ।
रियाको गालामा सिबिआइ अफिसरकाे च’ड्कन, कारण यस्ताे रहेछ…